Mwanasikana Chaiye waSara | Titi Koetin
AKABHABHATIDZWA MUNA 1957
NHOROONDO YOUPENYU Hanzvadzi yakashandisa uchenjeri pakubatsira murume wayo kuti adzidze chokwadi. Murume wacho aimbopikisa.—Nyaya iyi yakataurwa nemwanakomana wake, Mario Koetin.
AMAI vangu vaiva munhu ane rudo, akasununguka kumunhu wese uye aifarira Bhaibheri. Pavakaonana nemumishinari ainzi Gertrud Ott, muguta rinonzi Manado, kuNorth Sulawesi, vakabva vabvuma kudzidza Bhaibheri vakava muchokwadi. Asi baba vangu Erwin avo vaiva chamangwiza mubhengi uye vakazova sachigaro weJakarta Stock Exchange, vaipikisa amai vangu zvakasimba kuti vasanamate.
Rimwe zuva baba vakaudza amai kuti vasarudze chavaida.
“Sarudza kuti unoda ini murume wako here kana kuti chechi yako!” baba vakadaro vakatsamwa.
Amai vakafungisisa nezvenyaya yacho, ndokuzopindura zvinyoro nyoro vachiti, “Ndinoda zvese, murume wangu naJehovha.”
Baba vakabva vapererwa, uye hasha dzavo dzakabva dzaserera.
Nekufamba kwenguva, baba vakanga vasingachanyanyi kushora chitendero chaamai nekuti baba vaida chaizvo amai uye vaikoshesa chaizvo uchenjeri hwavo nekunzwisisa kwavo.
Asi amai vaida kuti baba vabatanewo navo pakunamata kwechokwadi. Pashure pekunge vanyengetera nemwoyo wese nezvenyaya yacho, vakayeuka kuti baba vaiva munhu anofarira kudzidza mitauro yakasiyana-siyana. Saka vakatanga kuisa mavhesi eBhaibheri akanyorwa muChirungu panzvimbo dzakasiyana-siyana mumba. Vakati kuna baba, “Ndiri kudzidzira Chirungu.” Sezvo vaiziva kuti baba vaifarira zvekuteerera munhu anenge achitaura pamberi pevanhu, amai vakavakumbira kuti vateerere pavanenge vachidzidzira hurukuro dzavo dzepaChikoro chaMwari Choushumiri. Baba vakabvuma. Uyewo amai vaiziva kuti baba vanoda zvekugamuchira vaeni, saka vakavakumbira kuti mutariri wedunhu azogara pamba pedu. Baba vakabvuma. Amai vaizivawo kuti baba vaida mhuri yavo, saka vakavakumbira kuti kana vachida vapinde nesu magungano echiKristu. Vakabva vangobvuma.
Nekufamba kwenguva, mwoyo murefu waamai neuchenjeri hwavo zvakaita kuti baba vadzore mwoyo. Patakazotama tichinogara kuEngland, baba vakatanga kupinda misangano uye vakabva vawirirana naHama John Barr, avo vakazova nhengo yeDare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha. Baba vakabhabhatidzwa gore iroro uye amai vakaita sevachabata denga nekufara. Makore akazotevera, baba vakabva vatowedzera madiro avaiita amai.
Amai vaiva nepfungwa netsika dzakachena, vairemekedza vamwe uye vainge vakasimba pakunamata zvokuti munhu wese aivaziva aivafarira
Dzimwe shamwari dzedu dzaifananidza amai naRidhiya, mukadzi akararama pakatanga chiKristu uyo aigamuchira vaeni zvakanaka. (Mab. 16:14, 15) Asi kana ndiri ini, ndinovaona saSara, uyo aizviisa pasi pemurume wake Abrahamu nemwoyo wese. (1 Pet. 3:4-6) Amai vangu vaiva mukadzi ane pfungwa netsika dzakachena, anoremekedza vamwe uye akasimba pakunamata. Munhu wese aivaziva aivafarira. Muenzaniso wavo ndiwo wakabatsira baba kuti vave muchokwadi. Ini ndinototi vaiva mwanasikana chaiye waSara.